Ilay izao tontolo izao miitatra - Church of God Switzerland of the World
lahatsoratra > Miresaka momba ny fiainana > Ny Universe manitatra
Rehefa namoaka ny teoria ankapobeny momba ny relativité i Albert Einstein zato taona lasa izay (tamin’ny 1916), dia nanova mandrakizay ny tontolon’ny siansa izy. Iray amin'ireo zava-baovao lehibe indrindra hitany momba ny fanitarana tsy an-kijanona izao rehetra izao. Io zava-misy mahatalanjona io dia mampahatsiahy antsika tsy hoe halehiben’izao rehetra izao, fa koa ilay tenin’ny mpanao salamo hoe: Fa tahaka ny haavon’ny lanitra ambonin’ny tany no ametrahan’ny fahasoavany ny fahasoavany hanapaka izay matahotra azy. Tahaka ny halavitry ny atsinanana amin’ny andrefana no halaviran’ny fahadisoantsika amintsika (Salamo 10.3,11- iray).
Ity dia ao anatin'ny andiana Speaking of Life.